माथिल्लो तामाकोशीको आज साधारणसभा, के-के छन् त एजेण्डा ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > माथिल्लो तामाकोशीको आज साधारणसभा, के-के छन् त एजेण्डा ?
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको आज बुधबार वार्षिक साधारण सभा बस्दै छ । साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले जेठ २१ गते मंगलबारदेखि असार ११ गते सम्म बुक क्लोज गरेको छ । सभा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी, काठमाडौंमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ ।
सभामा कम्पनीले आयोजना स्थानमा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरु लगायत अन्य संस्थाहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहयोगको रकम अनुमोदन गर्ने विशेष प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै सर्वसाधारण सेयरधनीबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने ४ जना सञ्चालकको निर्वचनबाट गर्ने एजेन्डा पनि राखिएका छन् ।
तामाकोशीले आइपीओ जारी गरेपछि पहिलो पटक साधारणसभा गर्न लागेको हो । यसर्थ, अब साधारण सेयरधनीबाट यस कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ४ जना नयाँ सदस्य चयन हुनेछन् । सर्वसम्मत हुन नसके निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
२०७६ असार ११ गते १०:५६ मा प्रकाशित
छिट्टै मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन हुन्छ, आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छः देवेन्द्र पौडेल
संविधान दिवशलाई जनताको दिवश बनाउनु पर्दछ : प्रम ओली